Ukusabalalisa i-Intanethi: Amanethiwekhi asetshenzisiwe kanye namaseva azimele | Kusuka kuLinux
Hlukanisa i-Intanethi ngokwehlukile: Amaseva azimele we-Intanethi Engcono
Namuhla, umphakathi wolwazi wamanje uxhumeke kunethiwekhi yamanethiwekhi, ifu, i-Intanethi. Kanye nalesi simo, ukufakwa kwe-Internet phakathi nendawo kuye kwanda ezandleni zezinhlangano noma izinhlangano zomphakathi nezizimele.
Kepha, kuye kwenziwa nokunyakaza nobuchwepheshe, okufuna nokuvumela ukuguqulwa kwale nqubo. Iminyakazo nobuchwepheshe obuvumela noma obuthanda ukwabiwa kwamandla kwe-Intanethi, futhi kubuyise ukulawula nobukhosi bayo esakhamuzini, noma lokho, ngangokunokwenzeka, kuyenze ikhululeke kakhulu, ivikeleke, ibe yimfihlo futhi ihlolwe, futhi ingahlaselwa ngamandla we-hegemonic yamazwe ngamazwe noma amandla ohulumeni basekhaya, besifunda noma bomhlaba.
Akunamuntu kulezi zinsuku kuyimfihlo, ukuthi ukugxilwa kwe-Intanethi kusithinta kanjani sonke, abanye ngaphezu kwabanye, njengabantu ngabanye futhi sihlangene. Izibonelo ziningi, ezinjengalezi: Ukusetshenziswa kwethrafikhi yethu nedatha yizinhlangano noma izinhlangano, zombili ezomphakathi nezangasese, ukumaketha, ukumodeliswa komphakathi, ukulawula izakhamizi, ubuhloli bezentengiselwano noma ukuphepha komphakathi.
Ngaphezu kwalokho, ukubekwa phambili kwe-Intanethi kuthanda "Ukungathathi Hlangothi" kwayo. maqondana nesakhamuzi, izinhlangano kanye namazwe, ngalezi zinkampani ezifanayo noma izinhlangano, zombili ezomphakathi nezangasese. Udaba olukhonjiswayo, isibonelo, lapho izwe noma inhlangano ithinteka ngokuxhuma kwayo noma ukufinyelela kuyo, ngezinqumo ezingqubuzanayo, ezingenabulungiswa noma ezingezona zombili zabanye.
1 Amanethiwekhi asetshenzisiwe
2 Amaseva azimele
2.1 Umgwaqo olungile
I-Intanethi engabelwe amandla endawo ingayeka ukuba yinto enhle, uma ukuxhumana kwethu kungayi ngqo kwi-Internet Service Provider (ISP), kepha i-router yethu ixhuma ngqo namanye ama-routers, ngaleyo ndlela yakha inethiwekhi noma yikuphi, ukuze kamuva ibe yingxenye ye-Intanethi uma kudingeka. Futhi lokhu kungenzeka nje ngokufaka isoftware noma ukucushwa okuthile ku-router yethu okuvumela ukwakha inethiwekhi enezikhala.
Isibonelo salobu buchwepheshe noma izindlela zokwabiwa kwamandla ezindawo kungathathwa ku- amamodeli akhona asatshalalisiwe ekhompyutha futhi we ubuchwepheshe be-blockchain technology ngendlela yayo eyabelwe amandla. Njengoba amanethiwekhi akumele abe "per se" kuphela maphakathi. Njengamanje inethiwekhi ingaba yizinhlobo ezi-3, okungukuthi, ingaba:
Okuphakathi: Inethiwekhi lapho wonke ama-node ayo angaphandle, futhi exhunywe enkabeni. Ngendlela yokuthi bakwazi ukuxhumana kuphela nge-node emaphakathi nangeziteshi zayo. Kulolu hlobo lwenethiwekhi, ukuwa kwe-node emaphakathi kunciphisa ukuhamba kwedatha kuwo wonke amanye ama-node.
Kunikwe amandla: Inethiwekhi lapho kungekho node eyodwa emaphakathi, kepha kunalokho isikhungo esihlangene esinamachweba ahlukahlukene wokuxhuma. Ngaleyo ndlela, ukuthi uma eyodwa "yezindawo zokulawula" inqanyuliwe, awekho noma ambalwa ama-node asele enethiwekhi yonke alahlekelwa ukuxhumana.
Kusakazwe: Inethiwekhi lapho kungekho node eyodwa emaphakathi. Ngaleyo ndlela, ukuthi ukunqanyulwa kwanoma yimaphi ama-node kungadala ukunqanyulwa kokunye kunethiwekhi. Lokhu kungenxa yokuthi kulawa manethiwekhi, ama-node axhunywe komunye nomunye ngaphandle kwesidingo sokuxhuma nge-node eyodwa noma ngaphezulu emaphakathi.
Njengamanje kunezibonelo ezinhle zamanethiwekhi angempela alesi sitayela, okuthi esikhathini esizayo esifanele ikhule kakhulu futhi isakazeke kabanzi. Izibonelo ezinjengalezi:
Kwezinye izingxenye zomhlaba, kunemizamo ethokozisayo nokuhlolwa ngalo mqondo wokwakha amanethiwekhi asezindaweni ezisezingeni eliphansi. Isibonelo, e-Dubai (United Arab Emirates), kwenziwa ukuhlolwa okusebenzisa i-Bluetooth yawo wonke amadivayisi ahambisanayo ukwakha inethiwekhi esezingeni eliphansi.
Futhi iMastodon iyisibonelo esihle senethiwekhi esezingeni eliphansi. okungasekelwe kubuchwepheshe be-blockchain. Ngenkathi abanye bethanda uSteem, lapho noma ngubani angasebenzisa i-node kunethiwekhi futhi afunde ikhophi eligcwele lakho konke okuqukethwe kwayo, uma kusekelwe ku-blockchain.
Njengoba abaningi bethu sebevele bazi, ulwazi olusakazwa kwi-intanethi lugcinwa kumakhompyutha abizwa ngokuthi amaseva. Okungukuthi, lawa ngamakhompyutha nawo aqukethe izinhlelo ezenza ukuthi sikwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo kwezinye izinhlelo noma amakhompyutha kunethiwekhi noma kwi-Intanethi, esikubiza ngamakhasimende noma ama-node.
Cishe wonke amaseva we-inthanethi akhanyisiwe futhi axhumekile, imini nobusuku, izinsuku ezingama-365 ngonyaka, futhi zigcinwe ezikhungweni ezinkulu zemininingwane, mhlawumbe edolobheni elikhulu ezweni elithuthukile, ukuze zilawule ingxenye enhle yomgwaqo we-Intanethi ovela emhlabeni wonke.
Kepha, yilezi zikhungo ezinkulu zedatha ezakha isithiyo ekukhululeni nasekuvulekeni kwezokuxhumana. Njengoba lezi zivuna ukufakwa kwe-Intanethi maphakathi nakho, okwenza kube lula ukusetshenziswa kabi, ukuvinjelwa kanye nokulawulwa kokuhamba kolwazi lwethu. Ngaphezu kwalokho, bathatha imininingwane ephethwe njengempahla yabo, benza ngayo ibhizinisi kanye nezinhlangano ezisiqaphile futhi eziphula ubumfihlo bethu.
Ngakho-ke, indlela eyiyo okufanele ilandelwe ukufakwa, ukukhuluphala kanye nokusetshenziswa kwamaseva amancane, ngezindlela ezahlukene nezintsha zokusebenza namathuluzi, avela ezindaweni ezahlukahlukene (amazwe) futhi agcinwa ngabantu abehlukene (i-SysAdmins), ukunciphisa noma ukuqeda ubungozi bokusebenzisa kabi noma ukusika imininingwane yethu nezinsizakalo.
Lezi zinkonzo ezizimele ezizimele zingukuphikisana nohlobo lokuphathwa kwenethiwekhi kanye nemininingwane yethu. Kunezincazelo eziningi ezikhona zazo, kepha ukucaphuna uTatiana de la O ku-athikili ka URitimio Dossier kubukhosi bobuchwepheshe, ekhasini 37, ibachaza njengo:
“Abasebenzi abazisebenzelayo abazinakekelayo ngokuncika emsebenzini wokuzithandela futhi kwesinye isikhathi okhokhelwayo wabanakekeli babo lapho bethola uxhaso emphakathini abasebenzela kuwo. Ngakho-ke, abancikile esikhungweni sikahulumeni noma esizimele ngokusebenza kwabo. Kunoma ikuphi, ukuzimela kwalezi zinsizakalo kungahluka, abanye bamukela izibonelelo noma bafakwe ezikhungweni zemfundo kanti abanye bangafihlwa ehhovisi noma babekwe esikhungweni semfundo noma sezobuciko futhi abadingi mali engako.
Njengesibonelo samaSeva azimele asebenza namuhla sine:
Izinzuzo zokusebenzisa amaseva azimele yilezi:
Gwema ukuthengiswa nokwenza imali kwemininingwane yethu yomuntu siqu neyenhlanganisela.
Thuthukisa ukwehluka ngaphandle kwemikhawulo emikhulu yezohwebo noma kahulumeni.
Khulisa ukwabiwa kwamandla ezindawo kwengqalasizinda yezobuchwepheshe esivuna umphakathi.
Khulisa amazinga okuzimela kwemiphakathi maqondana nezinkampani nohulumeni.
Khulisa izinsizakalo zokubonisana nokuziqeqesha ngokwakho kwamaqembu abasebenzisi.
Qinisekisa ukuqina kwabasebenzisi ekushintsheni okungaba kubi kwezepolitiki, kwezepolitiki kanye nokuhweba ezindaweni zabo zemvelaphi.
Ukucaphuna Inethiwekhi YeMastodoni:
“Inethiwekhi yokwabiwa kwezindawo inzima kakhulu kohulumeni ukuyibheka. Uma isiphakeli sibhidlika noma siqala ukungaziphathi kahle, inethiwekhi iyaqhubeka ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuthuthela abangane bakho nezithameli kwenye ipulatifomu.
Singaphetha ngokuthi ukwabiwa kwamandla kwe-Intanethi, kungaba ngamanethiwekhi asezingeni eliphansi kanye / noma ngamaseva azimele, iyindlela efanele yokuhamba, ngoba i-Intanethi ekhululekile nevulekile ayisoze yasebenza uma izinsiza zayo nengqalasizinda (ukuxhumana) kungasatshalaliswa.
Ngaphezu kwalokho, ukungathathi hlangothi okuphelele (umphumela wokusatshalaliswa kwamandla) yinto okumele sonke siyilwele futhi siyivikele izinyo nezipikili. Kungumsebenzi wethu ukusebenzisana ukuze izinkampani ezinkulu noma izinhlangano, ezomphakathi nezizimele, zingakuguquli noma zikulawule. Ukungathathi hlangothi kuyisici esihle kakhulu kuwebhu, futhi lokhu akunakuphuthelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Hlukanisa i-Intanethi ngokweqile: Amanethiwekhi asetshenzisiwe kanye namaseva azimele
Umqondo ubukeka uthakazelisa kepha ngicabanga ukuthi akunakwenzeka ngoba imininingwane yethu lapho kudlula ngakunye kwalawa maseva entshontsho bekungeke kugcinwe kuwo? Ngicabanga ukuthi angi ..
Ukuxolisa kwami ​​ngiphawule ngingakuphendulanga.
Akufanele ukwesabe lokho, ngoba empeleni lonke ulwazi lomgwaqo kanye nezakhamizi olunqamula i-inthanethi luyaskenwa, luhlaziywe futhi okuningi kwalo kugcinelwe ukusetshenziswa kamuva ngamanye ama-megacorporations nohulumeni abazimele. Ngakho-ke, kuyohlale kunethuba lokuthi uma amanethiwekhi ahlukene enziwa ngaphakathi noma ngaphandle kwe-intanethi, angena ngokufanayo noma omunye walokhu akwenzayo. Kepha ekugcineni kosuku, umbono wokuhamba ngokukhululeka, okuphephile nokuyimfihlo kwesakhamuzi esivamile uyohlala njalo kuwumgomo ozuzwe.
Lapho othile efuna ukufinyelela kudatha, benza isicelo kuseva yakho, uma kwenzeka othile ehlela i-bot eyenza amakhophi akho konke (kulokho akwazi ukufinyelela kukho) ngoba lokho kungenye into, kepha kufana nokuba ne-server yakho ye-Apache nayo iwebhusayithi yakho.
I-Apple, i-Facebook, i-Google ne-Amazon basolwa ngokuzimela futhi bayaphenywa